Mampiasa graffiti hitsikerana ny fitondrana miaramila ao Thailandy ilay mpanakanto ‘Headache Stencil’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Aogositra 2018 13:23 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, Français, русский, Español, Ελληνικά, 日本語, bahasa Indonesia, Italiano, English
Headache Stencil, maka sary eo anoloan'ny sarin'ny praiminisitra ao Thailandy nomena endrika saka maneki-neko. Sary: Headache Stencil, nahazoana alalana.
Rehefa naka fahefana an-keriny tamin'ny May 2014 ny tafika ary avy eo nanangana lalàm-panorenana vaovao manamafy governemanta tohanan'ny miaramila, nampanantena hamerina ny fifidianana sy ny fitondrana sivily izy ireo, saingy mbola tsy tanteraka izany.
Nanomboka nanao graffiti i Headache Stencil taorian'ny fanonganam-panjakana taona 2014. Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Art Whore, tranonkala manadihady ny zava-kanto pop ambanin'ny tany (tsy miseho masoandro), manazava ny fomba nanombohany izy:
Tena manao ‘zava-kanto’ tokoa aho tamin'ny andro nanaovan'ny tafika fanonganam-panjakana tany Thailandy. Tena tezitra tamin'ny miaramila tamin'izany andro izany. Avy eo nanao graffiti.
Tamin'ny resadresaka hafa niaraka tamin'ny gazety South China Morning Post ao Hong Kong, nanazava ny antony nisafidianany ny anarana hoe ‘Headache Stencil’ izy:
Niantso ny tenako hoe Headache (Aretin'andoha) noho ny antony iray, ry rahalahy … Te-hanome aretin'an-doha ho an'ny olona sasany [matanjaka] aho.
Raha mahita ny asako ny olona ary manomboka mahatsikaritra fa misy ny zavatra tsy rariny, dia nahatratra ny tanjoko aho.
Matoky izy fa manana adidiy haneho ny fahasimban'ny fiainana eo ambany fitondrana Junta [miaramila] ireo artista Thailandey. Tamin'ny resadresaka niarahana tamin'ny The Nation, gazety iray mpivoaka isan'andro amin'ny teny Anglisy ao Thailandy, nilaza i Headache Stencil hoe:
Maneho ny didy jadona, ny kolikoly ary ny fahaverezan'ny fahalalahana eo anivon'ny fiarahamoninay ny zavakantoko. Izany no anjara asa lehibe eo amin'ireo mpanakanto, manasongadina ny aretin'ny fiarahamonina ary milaza amin'izao tontolo izao hoe inona no atrehin'i Thailandy eo ambany fitondrana miaramila.
Tany am-piandohan'ity taona ity, nilaza izy fa notadiavin'ny polisy noho ny graffiti nataony nanesoeso ny praiminisitra lefitry ny firenena izay naseho niaraka tamin'ny famataranandro Rolex ampolony:
Nampiasa ny marika malaza amin'ny famantaranandro i Headache Stencil mba hampifanohitra azy amin'ny famantaranandro lafo vidin'ny praiminisitra lefitra. Manamarika ny fotoana mihoatra ny fetra itoeran'ny tafika amin'ny maha-filohan'ny governemanta sy ny filàna mba ho ‘taitra’ amin'ny toe-draharaha amin'ny alalan'ny famaranana ny didy jadona. Loharano: Stencil Headache, nahazoana alalana.
Nalaza tamin'ny vaovao ny graffiti-ny ‘Panther Mainty’ taorian'ny nanesoran'ny manampahefana izany. Manondro tatitra mombanà mpanefoefo malaza iray tratra nihaza bibidia, anisan'izany ny panther mainty ny graffiti nataony. Nanao sarina panther tamin'ny rindrina sy bokotra moana manamarika ny ahiahian'ny maro i headache stencil fa tsy horaharahian'ny governemanta ny tranga:
‘Panther mainty’ avy amin'i Headache Stencil, nahazoana alalana.
Ireto ambany ireto ny asa-kanto an-dalamben'i Headache Stencil, manasongadina ny fitondrana miaramila ela loatra sy ny fanemorana lavareny ny fifidianana misokatra:
“Efa-taona ny fitondrana miaramila Thailandey. Aiza ny demokrasia? Malahelo anao izahay.” Sary sy fanazavana avy amin'i Headache Stencil, nahazoana alalana.
“Mandra-paha oviana no ho governemanta ianao? Te-hanemotra ny fifidianana indray???? Azafady… ela loatra izany.” Sary sy fanazavana avy amin'i Headache Stencil, nahazoana alalana.
Namorona ity afisy eto ambany ity i Headache Stencil rehefa noraràn'ny governemanta ny fizarana ny fanontana gazetiboky Time izay nampiseho ny tantaran'ny lehiben'ny tafika teo aloha sady praiminisitra ankehitriny Prayut Chan-o-cha:
Sary avy amin'i Headache Stencil, nahazoana alalana.
Amin'ity lahatsary vao haingana misy ny resadresaka niarahana tamin'ny tranonkalam-baovao ao Singapaoro, The Online Citizen, ity, manadihady lalina ny fanamby sy ny antony hiasana amin'ny maha-mpanakanto sy mpikatroka ara-politika i Headache Stencil :